Dhalinyaro ka mid noqoneysa ciidanka Badda Galmudug oo tababar loo furay – Radio Muqdisho
Qeybtii sadexaad ee ciidamo lagu biirinayo ciidamada badda ee maamulka Galmudug ayaa tababar uga furmay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoo ay tababarkani bixinayaan saraakiil khubaro ah oo ku xeeldheer arrimaha badda.
Ciidamadan ayaa muddo tababarkan ku qaadan doona magaalada Gaalkacyo iyadoo kadibna loo qaadi doono dalka dibediisa si ay u qaataan tababar aqoon kororsi ah oo la xiriira ilaalinta xeebaha dowlad goboleedka Galmudug si ay ula dagaalamayaan kooxaha burcad badeedka iyo argagaxisada.
Wasiirka kaluumeysiga,kheyraadka badda iyo dekedaha maamulka Galmudug C/qaadir Cali jaamac Qalabxoor ayaa sheegay in ciidamadan ay muhiimad gaar ah u leeyihiin deegaanada Galmuudg iyo guud ahaan badda Soomaaliya maadaama sida uu tilmaamay ay bateen burcada ka qowleysata xeebaha gobollada dhexe isagoo xusay inay ku filnaan doonaan ilalainta xeebaha iyo ka hortaga burcadbadeeda.
horay ayaa mudo laba jeer ah waxaa dalak Jabuuti tababar ugu soo qaatay ciidamada badda ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug kuwaasoo xiligan howlo muhiim ah ka haya deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.
Amniga Muqdisho oo si weyn loo adkeeyay iyo wufuud IGAD kasocota oo soo gaareysa